यौनक्षमता’ ह्वात्तै बढाउन चाहानुहुन्छ ? तुरून्त यी ११ घरेलु चिज खानुहाेस्
यौ न क्षमता बढाउने चाहाना सबैलाइ हुन्छ । तरपनि हामीले यस बिषयमा ध्यान दिएका हुदैनौ ।
यसैले कमजोर यौ न क्षमताका कारण कतिपयको घर नै बिग्रिएको अवस्था समेत छ । यहाँ हामीले केहि घरेलु उपाय बारे जानकारी दिदैछौ ।
सले यौ नांगमा रक्तसञ्चार तीव्र पार्छ । यौ नांगमा रक्तसञ्चार तीव्र पार्नकै लागेर भिया ग्रा लिने
खरबुजा खरबुजामा सिटुलाइन नाम गरेको एमिनो एसिड प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले यौ नांगमा रक्तसञ्चार तीव्र पार्छ । यौ नांगमा रक्तसञ्चार तीव्र पार्नकै लागेर भि याग्रा लिने गरिन्छ । जुन काम खरबुजा खाएर पनि गर्न सकिन्छ । खरबुजा नियमित सेवन गरेमा तपाईले सोचेजति यौ न क्षमता बढ्नेछ ।
अदुवा अदुवा खानाले यौनांगसहित शरीरका सबै भागमा रक्तसञ्चार तीव्र हुन्छ । यौ ‘नसम्पर्कअघि अदुवा हालेको चिया खाने गरेमा शरीर तात्छ, मुटुको धड्कन र रक्तसञ्चार तीव्र हुन्छन् । पार्टनरसँग चाहेजति खट्न सक्नुहुन्छ ।
एभोकाडो एभोकाडोमा भिटामिन बी–६ र पोटासियम प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् । भिटामिन बी–६ ले पुरुषमा से ‘क्स हार्मोन बढाउने गर्छ । पोटासियमले महिलाको थाइराइड ग्रन्थिलाई स्वस्थ राख्छ ।
कुरिलो कुरिलोमा भिटामिन–ई र फोलाइट पाइन्छन्, जसले पुरुष तथा महिला दुवैलाई यौ नका क्रममा च रमोत्कर्षको अवस्थामा चाँडै पुग्न सघाउ पु¥याउँछ ।
केरा केरामा ब्रोमेलाइन नामक इन्जाइम प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसले का मोत्तेजना बढाउने गर्छ । त्यसै गरी यसमा पाइने पोटासियम र भिटामिन–बीले पुरुष तथा महिला दुवैमा सेक्स’ हार्मोन र ऊर्जा बढाउने गर्छन् ।
अण्डा अण्डामा भिटामिन बी ६ र भिटामिन बी ५ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यिनले से क्स हार्मोनसहित समग्र हार्मोनलाई सन्तुलनमा राख्ने गर्छन् । त्यस्तै, यसमा पाइने भिटामिन बी १२ ले पुरुषमा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढाउने गर्छ ।
रातो खुर्सानी यो खानाले मुड बनाउने इन्डोर्फिन नामक तत्व शरीरमा बढी रिलिज हुन्छ । यसबाट रक्तसञ्चार तीव्र बन्छ । यौ न जीवनका लागि तीव्र रक्तसञ्चार आवश्यक छ ।
फर्सी बियाँ यसमा ओमेगा–३ नामक फ्याटी एसिड र जिंक पाइन्छन् । यसले यौन जीवनलाई भव्य बनाउने हार्मोन उत्पादनलाई तीव्र बनाउने काम गर्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
यौ’न शक्ति बढाउन यस्तो गर्नुहोस् ? घरेलुु उपाय ?